5 Plus > Élő Televízió. Online Televízió. Élő TV-nézés ingyen. Online TV. Élő TV közvetítés.
Élő Televízió > TV-csatornák > Myanmar >5Plus
5 Plus Élő adás
5 Plus 4.3/5 - 8 szavazat
Ról ről5Plus
5 Plusaszociális hálózatokról:
5Plus အခမဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်သံလိုင်း (Your Free Digital TV Channel) အနေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်များရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ တိုးမြင့်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး စိတ်ရွှင်လန်းကာ သုတမျိုးစုံရရှိစေမဲ့ Lifestyle Variety အစီအစဉ်များအပြင် အသိဥာဏ်တိုးပွားစေမဲ့ Edutainment ပညာပေး အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရသမျိုးစုံပေးမဲ့ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတို့ကို မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် အသေးစိတ်စိစစ်ရွေးချယ် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Myanmar / Helyi TV
Mizzima, derived from the Pali word for middle or moderate and chosen for its inference of an unbiased and independent...
Myanmar / Nyilvános TV
The Democratic Voice of Burma (ဒီမိုကရတေဈမွနျမာ့အသံ) started asanon-profit media organization based in Oslo, Norway...
Channel K is home to some of the biggest stars in the entertainment industry, bringing you variety shows and live...
Myanmar / Szórakozás
MITV isacelebration of all aspects of Myanmar culture from the ancient to the brand new, in english language.Launched...